Wararka – Page 1592 – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Ciidamo ka Tirsan kuwa al-shabaab ayaa weerar qorshaysan Habeenkii xalay ahaa waxa ay ku qaadeen xerada Laanta-Buuro oo aheyd xiligii dowladii dhexe ee soomaliya xabsigii ciidamada asluubta Soomaliyeed. Dagaal saacada badan socday ayaa la sheegay in uu dhaxmaray ciidamo ka Tirsan kuwa dowlada soomaliya iyo al-shabaab oo xerada Laanta-Buuro weerarka ku qaaday. Ciidamo ka Tirsan kuwa al-shabaab ayaa la sheegay ...
FaahFaahin ku Saabsan Dabkii Xalay ka kacay Isbitaalka Banaadir ee Magaalada Muqdisho
Waxaa Habeenkii xalay ahaa Lagu guuleystay daminta dab ka kacay Isbitaalka Banaadir ee Magaalada Muqdisho kaasi oo aan la ogeyn waxa sababay. Waxaa durbadiiba gaaray isbitaalka Banaadir Gaadiidka dab damiska Maamulka Gobolka Banaadir iyo Taliyaasha Nabad sugida iyo Booliska Gobolka Banaadir kuwaasi oo sugayay amaanka isbitaalka si aysan ugu dhicin boob ay sameeyeen qaar kamid ah dadweynaha. Saacado kadib waxaa ...
Weerar Caawa ka Dhacay Magaalada Boosaaso ee Gobolka Bari
Wararka caawa ka imaanaya Magaalada Boosaaso ee Gobolka Bari ayaa ku waramaya in habeenkii Labaad kooxo hubeysan ay weerar ku qaadeen kontorool ay ciidamada Maamulka Puntland ay ku leeyihiin magaaladaas. Rag Hubeysan ayaa la sheegay in ay caawa weerar qorshaysan ay ku qaadeeen saldhig ay ciidamada Maamulka Puntland ay ku lahaayeen Kontorool ku yaala Magaalada Boosaaso ee Gobolka Bari Ilaa ...
Dowlada Soomaliya oo Sii Deysay Siyaasiga Cabdi Nuure Siyaad
Warar lagu kalsoonaan karo oo ay idaacada simba halayso ayaa sheegaya in galinkii dambe ee maanta in xabsiga laga sii daayay siyaasiga Cabdi Nuure Siyaad oo loo yaqaano (Cabdi Waal). Ciidamada Kenya ayaa Cabdi Nuure Siyaad (Cabdi Waal) kasoo qabtay baar ku yaala Magaalad Nairobi ee dalka Kenya waxaana gacanta loo galiyay ciidamada Nabad sugida dowlada soomaliya. Siyaasiga Cabdi Nuure ...
Diyaaradaha Kenya oo Duqeeyay Saldhigyo ay al-shaabaab ku Lahayeen Gobolka Jubbada Hoose.
Diyaaradaha dowlada Kenya ayaa maanta Duqeymo ka Fuliyay saldhigyo ay al-shabaab ku lahaayeen inta u dhaxeyso Degmooyinka Afmadow iyo Dhoobley ee Gobolka Jubbada Hoose. Dad ku sugan deegaanada ay maanta duqeeyeen diyaaradaha dowlada Kenya ayaa warbaahinta u sheegay in ilaa dhowr gantaal lagu garaacay saldhigyo al-shabaab ay ku lahaayeen Degmooyinka Afmadow iyo Dhoobley ee Gobolka Jubbada Hoose. Kadib markii ay ...
Dab ka Kacay Dhismaha Isbitaalka Banaadir ee degmada Wadajir
Dab xoogan ayaa goor dhaweyd ka kacay Dhismaha Isbitaalka Banaadir ee degmada wadajir ee Magaalada Muqdisho. Dad ku sugan nawaaxiga isbitaalka Banaadir ayaa warbaahinta simba u sheegay in dabka uu ka kacay dhismaha isbitaalka isla markaana uu ku faafay qeybaha isbitaalka Banaadir uu ka kooban yahay. Suxufiyiin gaaray Isbitaalka Banaadir oo ku yaala Degmada wadajir ee Magaalada Muqdisho ayaa waxay soo sheegayaan ...
Dhageystayaal kusoo dhawaada warka Habeen Radio Simba ee Magaalada Muqdisho waana Habeenimo axad ah tariikhdana ay ku beegan Tahay 20-3-2016 Warka habeen 20-3-2016
Dowlada Imaaratka oo Deeq Gargaar Maanta gaarsiiyey Maamulka Somaliland.
Hay-da gargaarka ee uu leeyahay madaxweynaha dalka imaaratka ee lagu magacaabo Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, ayaa deeq gargaar oo kabada 1000 tan. Afhayeen u hadlay Hay-ada gargaarka ee imaaratka ayaa sheegay in deeqdaan looga jawaabay abaaraha ka jira maamulka Somaliland. Deeqdaan gargaar ayaa u badneed shixnado cunooyinka aas-aasiga ah waxaana ay ka koobneed 1,060 tan. Deegaanada burco iyo ...
Kenya: waxaana Laba weerar Al-shabaab kaga dilnay 34 dagaal yahan.
Saraakiisha ciidanka Kenya ayaa sheegay goor dhaw oo galabta ah in laba weerar oo si gooni gooni ah ay ciidankooda ugu qaadeen fariisimo ay Al-shabaab kaga sugnaayeen somaaliya ay ku dileen 34 dagaal yahan oo ka tirsanaa xarakada Al-shabaab. Weerarka koobaad ayaa saraakiishu ay xuseen in ay ku dileen 13 dagaal yahan oo Shabaab ka mid ahaa waxaana laga fuliyey ...
Wasiirkii hore ee kaluumeysiga Ingiriiska oo Qaramada Midoobe ku Eedeeyey in ay dhiira galinayaan Burcad badeeda Soomaalida.
Tony Baldry oo ahaa wasiirkii hore ee kaluumeysiga dalka ingiriiska ayaa waxaa uu qaramada midoobe ku eedeeyey in ay dhiiri galinayaan kooxaha burcad badeeda soomaalida ee wali ay jirto qatartii caalamiga aheyd ee kooxahaasi. Tony Baldry ayaa waxaa uu sicad u sheegay in hanaanka ay qaramada midoobe ku ansaxisay in ciidan ajanabi ah loo diro xeebaha soomaaliya ay tahay nidaam ...
Page 1,592 of 1,830« First...1,5601,5701,580«1,5901,5911,5921,5931,594	»	1,6001,6101,620...Last »